Rustic Glamping Nature Experience in Wine County - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAdrienne & Morgan
UAdrienne & Morgan yi-Superhost
Balekela kwigumbi lakho elipholileyo ngaphandle kwekhabhathi yegridi ehlathini eSawdust FarmCamp. Ijikelezwe yiSawdust Gcina inxalenye yeMyuziyam yeMbali yeNdalo yaseCleveland eGeneva, eOhio. Paka kufutshane nekhabhinethi yakho ehlathini. Ukuphumla kwiveranda kwi-hammock okanye ukunyuka kwehlathi; umlambo kukuhamba okufutshane endulini. Yonwabela umlilo kwindawo yomlilo kunye ne-s'mores okanye iwayini evela kwenye yeewayini zasekhaya.
I queen air bed ikwifreyim enememory foam topper kule cabin yegumbi elinye. Yiza neengxowa zakho zokulala zabantu ababini abaphantsi komandlalo (i-gym mat) okanye usebenzise i-hammocks ezimbini kwiihuku ngaphakathi. Ikhabhinethi ilingana kakuhle ne-4 kwaye ngoMeyi-Septemba ungazisa intente ukuya kuthi ga kwi-2 yabantu abaninzi. Iingubo ezongezelelweyo kunye nemiqamelo zibonelelwe; Ngexesha lemozulu ebandayo enye indawo yokuthuthuzela kunye nesifudumezi sepropane sangaphakathi ukongeza kwisitovu sentsimbi esisamenteni sobushushu. Ikhawuntara, iikhabhathi ezinezixhobo zokupheka, izitya kunye nepropane Colman camp stove and fan. Ibhentshi ephothiweyo, isitulo, isitulo, iitafile ezimbini ezisongwayo kunye nezitulo ezisongwayo ezibini. "Iileta ezivela kwiSawdust", incwadi ebhaliweyo malunga nemithi yeCleveland Natural History Explorer Magazine kunye nezinye iincwadi ezininzi kunye nemidlalo kunye nezixhobo zobugcisa kunye nezinto zokudlala.
Ngaphandle kwiveranda egqunyiweyo unetafile yecafe enezitulo ezibini kunye neehuku zehammock ezingaphezulu. Ukusetyenziswa kwakho umgodi womlilo, ibhentshi yepikiniki, kunye nendlu yama-Amish engaphandle malunga neenyawo ezingama-40 ukusuka kwikhabhini. NGAPHANDLE KWE-PROPANE HEATED SHAWER Ifumaneka KUPHELA AMAFUDUSI AMAPHEPHA ABANGAPHEZULU OBANGQINAYO (Meyi-Sept). Izibane zelanga ngaphakathi nangaphandle ezine-USB OUTLETS ezi-2.
Oku kucinyiwe kwigridi ukuze AKUKHO IZIPHUMO ZOMbane, AKUKHO AMANZI ABAQHUBEKAYO kwaye AKUKHO NEZIKHELI.
UKUSHISA YINKANI emini kunye ne-PROPANE heater ebusuku. Iinkuni zomlilo kunye nezixhobo zokuqalisa umlilo zibonelelwa. Ibandakanyiwe kwintlawulo yokucoca ngamanzi okusela (Primo) kunye nokuhlamba (i-cube yamanzi eluhlaza okwesibhakabhaka) ipropane kunye nomthwalo wokhuni ngaphakathi nangaphandle. UMRHUMO WOKUCOCUKA UHLANGANISA UMLAWULO WOKUQALA WOMLILO WOKUKHULA Iinkuni ezongezelelweyo zingathengwa ngeedola ezingama-20 kwindawo yomlilo kunye neenkuni ezincinci ngaphakathi kwe-15 yeedola, i-cooler iyafumaneka xa iceliwe.
Indawo yokupaka ibekwe ezantsi kwendlela ukusuka kwikhabhini kuphela ubude bemoto ezi-4 ubude kwaye kwabelwana ngayo nabaqeshi beentente. Intente ikumgama wemizuzu emi-3 ukusuka kwindawo yokupaka ubuyela ehlathini ukuze ube nemfihlo yakho.
IRHAFU YOKUBHALISA KWI-LOCAL LODING YE-5% iqokelelwa ngokwahlukileyo kwintlawulo yokubhukisha. Siya kuthumela isicelo sentlawulo emva kokuhlala kwakho.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.92 · Izimvo eziyi-96
Ikhabhinethi ibekwe umva ukusuka kwindlela yegrabile malunga ne-1/4 yeemayile kunye ne-3 min ukuhamba ukusuka kwindlu yethu. Ijikelezwe ngokupheleleyo ngamaplanga. Abamelwane abakufutshane bakwelinye icala lendlu yethu malunga ne-1/4 yeemayile kunye ne-mayile kwelinye icala. Sinabamelwane abatsha abakha indlu ngaphesheya kwesitalato nabo babekwe umva endleleni emahlathini. Ukuqhuba okufutshane ukuya kwi-Thompson Ledges kwezinye iifomati ezinkulu zamatye, i-Thompson Speed Way; I-Geneva yimizuzu eyi-15, i-Geneva-on-the-Lake yi-25 min. Iindawo zewayini ezikufutshane yiDebonne kunye neGrand River kunye nabanye abaninzi kwi-3.6 yeemayile. Kwakhona isidlo sangokuhlwa kwi-Thompson Square kufutshane neLedges ebizwa ngokuba yiStockers ePaki (imali kuphela) imenyu emangalisayo yesidlo sakusasa sangeCawa. Jonga isikhokelo sethu ngolwazi oluthe kratya kule ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Adrienne & Morgan
My husband, Morgan and two girls and I generally travel together. We are building a homestead where we have enjoyed hosting our tiny cabin in the woods. Took the leap to homeschool and are now hoping to travel more.
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye siya kuhlonipha iindwendwe ezinqwenela ukuba bucala. Ukuba ufuna nantoni na silapha ebumelwaneni. Nceda unxibelelane ukuba uneziphi na iingxaki asikwazi ukusombulula ezinye izinto emva kokuba ukuhlala kwakho kuphelile.
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye siya kuhlonipha iindwendwe ezinqwenela ukuba bucala. Ukuba ufuna nantoni na silapha ebumelwaneni. Nceda unxibelelane ukuba uneziphi n…